Noqoshada Muwaadin Maraykan (U.S.) ah | LawHelp Minnesota
Noqoshada Muwaadin Maraykan (U.S.) ah
Noqoshada Muwaadin Maraykan (U.S.) ah (PDF)332.47 KB
Maxaan ku heli muwaadin ahaan?
Kuwa kani waa qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato hadii aad ka fakaraysid noqoshada muwaadin Maraykanka (U.S.) ah. Kolka aad noqoto muwaadin Maraykanka (U.S.) ah waxa aad helaysaa waxyaabahan:
Xaqqa aad ku codeyn karto
Waa aad ka bixi kartaa sahalna dib ugu so geli kartaa wadanka.
Waxa aad inta badan ka caawin karaa xubnaha qoyskaaga inay yimaadaan kuna noolaadaan wadanka U.S.
Ilmahaaga ka yar 18 sanno waxa ay noqon muwaadiniin Mareykan ah (U.S.) markiiba.
Laguma masaafurin karo. Marmar badan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee dambiyada gaysta waa la masaafurin karaa.
Waxa aad ka codsan kartaa shaqooyin dowlada dhexe.
Waxa aad u yeelan xaquuq qaar ka mid ah gagaarada dowlada sida, (MFIP) iyo (SSI).
Waxa aad heli kartaa dal ku galka Mareykanka (U.S. passport).
Badanaa waxa aad ka heli kartaa adeeg fiican kolka aad booqato Safaaradaha Mareykanka (U.S.) ee wadanka dibadiisa ah.
Ma wax baan ka tanaasuli si aan u noqodo muwaadin?
Waxa aad balan qaadi inaad faraha ka qaado daacadnimadii aad u ahayd wadanka aad u dhalatay. Tani waxa ay wax ka bedeli kartaa xaquuqdii aad ku lahayd wadankaa. Wadan walbaa waxa uu leedahay xeerarka u gaar ah. Hubi xeerarka wadanka aad u dhalatay. Wadanka aad u dhalatay waxyaabaha aad xaqqu u lehayd ee aad waayi karta waxaa ku jira:
Xaqqa ah inaad hanti halkaa ku yeelan karto.
Waxyaabahani iyana waxaa dhici karta inay isbedelaan:
Xaquuqdaada haysashada ilmaha
Xaquuqdaada aad ku gali karto wadanka aad u dhalatay
Waxaa dhici karta inaad u baahato ruqso shaqo inaad hesho si aad uga shaqeyso wadanka aad u dhalatay ka dib kolka aad noqoto muwaadin Mareykan ah (U.S.)
Ciddee noqon karta muwaadin Mareykan ah (U.S.)?
Waa khasab inaad:
Ugu yaraan aad jirto 18 sanno hadii aad kaliyaa xareysanayso.
Aad lahayd deganaanshahaaga sharci ah muddo 5 sanno ah. Kaliya waa 3 sanno hadii aad is qabtaan aadna la noolayd qof muwaadin Mareykan ah (U.S.) ah ugu yaraan 3 sanno ama hadii laguu ansaxiyey codsi (VAWA) oo ku salaysan guursi muwaadin Mareykan ah (U.S.), (I-360 adigu isu xareyn).
Ku noolayd isla gobolk muddo ka badan 3 sanno.
Aad sharaf iyo anshax wanaagsan leedahay
Ku dhaarato inaad wadanka Mareykanka (U.S.) aad daacad u noqonayso.
Akhriyi karto, qorina karto kuna hadli karto Afka Ingiriiska aadna wuxuun ka taqaan Taariikhda iyo dowlada wadanka Mareykanka (U.S.). Waxaa dhici karta inaadan marin imtixaanada Afka Ingiriiska iyo taariikhda ah – hoos ka eeg taa.
Ilmahaygu mi noqon doonaan muwaadiniin iyana?
Ilmaha ka yar 18 ka sanno waxa ay noqon karaan muwaadiniin Mareykan (U.S.) ah kolka waalid uu noqoto muwaadin hadii:
1 waalid uu muwaadin noqdo ka hor intaa aan ilmahu gaarin 18 sanno, IYO
In ilmahu uu haysto sharci dagaansho rasmi ah, IYO
Ilmaha inuu haysto waalidka muwaadinka ahi (xataa muddo yar), IYO
Ilmahu uusan guursan kolka waalidku uu noqday muwaadin.
Hadii aad haysato cadeymaha saxda ah ee waxyaabahaa, ilmahu waxa uu hel karaa warqada muwaadinimada Mareykanka (U.S.) ama dal-ku-galka Mareykanka (U.S. passport). Eeg warqadayada xogta Aruursan ee Dhalashada Muwaadinimada Mareykanka (U.S.) Cadeynta Muwaadinimada Ilmahaaga.
Siddee ayaan ugu diyaar garoobaa imtixaanka?
Xataa hadii aadan aqoon Afka Ingiriiska, faraha ha ka qaadin. Qaado fasalada Afka Ingiriiska iyo muwaadinimada ah. Qaar badan oo fasaladaas ahi waa lacag la’aan. Si aad u ogaato fasalada Afka Ingiriiska iyo muwaadinimada ee agagaarkaaga laga heli karo, wac hay’ada Talo siinta Far-barashada (Minnesota Literacy Council) ee khadkeedu yahay 1-(800) 222-1990. Ama gal shabakada ah http://mnliteracy.org/.
Ma khasabaa inaad barto Afka Ingiriiska?
Khasab kuguma aha inaad taqaan Afka Ingiriiska hadii adigu:
Aad tahay qof 55 jir ah ama ka weyn oo haystay sharciga deganaant rasmiga ah 15 sanno ama,
Aad tahay qof 50 jir ah ama ka weyn oo haystay sharciga deganaanta rasmiga ah 20 sanno ama
Waa lagaa rabaa inaad ku gudubto imtixaanka taariikhda Mareykanka (U.S.) iyo dowlada ah, laakiin waxa aad ku qaadan kartaa imtixaanka afka aad u dhalatay.
Hadii aad jirto 65 sanno aadna haysatay sharciga deganaant rasmiga ah 20 sanno, waxa aad qaadan kartaa imtixaanka fudud oo taariikhda Mareykanka (U.S.) iyo dowlada ah, waxa aadna ku mari kartaa waraysiga muwaadinimada afkgaaga.
Ka wadan hadii aanan baran karin Afka Ingiriiska?
Hadii aadan baran karin Afka Ingiriiska, taariikhda iyo dowlada sababto ah cudur aad qabto awgii, waxa aad codsan kartaa “Saamixid.” “Saamixida” macnaheedu waa ma aha inaad ku marto wareysiga Afka Ingiriiska ama aha inaad qaadato imtixaanka taariikhda iyo nidaamka dowliga ah.
Ha kuu soo buuxiyo dhaqtarkaagu, Saykolojistahaagu, ama dhaqtarkaaga duugduugu foomka la yiraa USCIS Form N-648. Wac 1-(800) 870-3676 si aad foomkan u hesho. Waxaad kalood ka heli kartaa khadka (online) ka ee shabakada www.uscis.gov. Geli N-648 santiuukha baarida.
Waydii dhaqtarkaaga ka hor inta aadan u dhiibin foomka in caymisku bixinayo arrintan iyo in kale. Waydii dhaqtarka inuu si faahfaahsan u yiraa waxa uu yahay cudurka aad qabtaa iyo sida uu kaaga hortaagan tahay wax barashada.
Ma kharash baa ku baxa codsiga muwaadinimada?
Haa. Khidmadu waa $725. Hadii aadan bixin karin khidmada, la hadal qareen ama qof sharciga yaqaan. Hadii aad ka hesho manfacyo dowlada dhexe sida, (MFIP) ama (SSI), ama hadii aad danyar tahay ama ay ku hayso dar-xummo dhaqaale, waxaa dhici karta inaad waydiisan karto laanta socdaalku (immigration) inay lacag la’aan kuugu xareyso codsiga ama aad bixiso khidmad yar, eeg warqadayada xogta aruursan ee Saamixida Khidmadaha Laanta Socdaalka.
Ma inaan la halaa qareen inta aanan codsan?
Kiisaska intooda badan, waa talo fiican inaad qareen hesho. Qareenku waxa uu ku siin karaa talo ku saabsan inaad codsato iyo in kale iyo sida loo buuxsado warqadaha. La hadal qareen hadii:
Aad uga noolayd dibada wadanka (U.S.) muddo ka badan 6 bilood wixii ka dambeeyey intii aad timid wadanka (U.S.)
Aad lahayd dhibaatooyinka khamri ama maandooriye isticmaal, oo uu ku jiro Qaadka (Khat) ama maandooriyeyaasha mamnuuca ah.
Lagu xiray ama lagugu eedeeyey dambi. (Waa lagu masaafurin karaa.)
Lagugu soo eedeeyey ama lagugu helay tacadi qoyska dhexdiisa ah ama ciddi ay adiga kaa qaadatay Amarka Amaan Siinta.
Aad bixin wayday lacagta kaalmada masaariifta ilmaha.
Aadan canshuur-celin xareysan ama lacag canshuur ah lagugu leeyahay.
Aad qof kale isqabteen kolkii aad soo gashay wadanka (U.S.), laakiin waxa aad codsigii halkan imaanta aad ku qoratay inaad ahayd “ilmo qaxooti ah oo aysan cid isqabin”.
Aadan runta u wada sheegin hay’ada laanta socdaalka (Immigration) hada ka hor.
Aad tahay nin aan iska diiwaan gelin qoraalada qafaalka ciidanka kolkaa uu dhalin yarada ahaa ama ciidanka ka tirsanaa laakiin gooystay.
Aad ka mid ahayd hada ka hor Xisbiga Hanti-Wadaaga.
Aad ka mid ahayd koox cunsuri ama nacayblayaal ah, ama koox doonaysay inay af-gambido dowlada Mareylanka (U.S.).
Aad qabto wax su’aal ah oo ku saabsan wixii isbedel ah ee noloshaada ku soo kordha ee saameyn kara sharcigaaga.
Aad Doonayso inaad magacaaga bedesho iyadoo qayb ka ah nidaamka qaadasahda muwaadinimada.
Ku Sheeg runta codsigaaga iyo wareysigaba. Hal dacwo oo dukaan wax ka xadid ahayd 10 sanno ka hor waxaa laga yaabaa inaysan kaa hor istaagin noqoshada muwaadin, laakiin been ka sheegida arrintaa waa ay kaa hor istaagi kartaa.
Barnaamijka Gargaarka Dhanka Sharciyada ee Laanta Socdaalka
(Legal Aid’s Immigration Law Project) ee (612) 332-1441
Rugta Sharciyada Muhaajiriinta (Immigrant Law Center) ee 1 (800) 223-1368
Adeegyada Qaxootiga, Muhaajiriinta, iyo Doolaalka ee SMRLS
(SMRLS Refugee, Immigrant and Migrant Services) ee (651) 291-2837